MZ မှာ Go to page ထည့်ပေးပါ — MYSTERY ZILLION
MZ မှာ Go to page ထည့်ပေးပါ
April 2011 edited April 2011 in About Forum
MZ မှာ စိတ်ကြိုက်စာမျက်နှာကို ကြည့်နိုင်အောင် Go to page ထည့်ပေးပါ
နားမလည်ဘူးဗျ။ ဘယ်လို go to page လဲ ?
Search box ကို ပြောတာလားမသိဘူး
MZ မှာ မိမိသိလိုတဲ့အကြောင်းအရာကို Header Bar မှာပါတဲ့ Search Box [Go] နဲ့သွားရှာလို့ရပါတယ်။
နောက် မိမိနှစ်သက်တဲ့ Category တွေကိုလည်း Site ရဲ့ ညာဘက်မှာပါတဲ့ အမျိုးအစားများ (Categories) မှာသွားရောက်ပြီးတော့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကို ကျွန်ုပ်၏ဆွေးနွေးချက်များ ( http://www.mysteryzillion.org/discussions/mine ) မှာ၀င်ကြည့်လို့ရသလို ..
လှုပ်ရှားမှု ( Latest Activities ) တွေကိုလည်း http://www.mysteryzillion.org/activity မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကို @minlwin ပြောတာ Favorite Pages ကိုပြောတာလားမသိဘူး? Discussion အနေနဲ့တော့ Favorite Pages ဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလို့တော့ထင်တာပါပဲ။
MZ က တော်တော်များများကိုပြည့်စုံနေပါပြီ။
Favourite အတွက် အပေါ်ဘက် ညာဘက်ထောင့်က ကြယ်လေးကို နှိပ်ပြီး bookmark လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ <div><img src="http://i55.tinypic.com/314frkp.jpg"></div><div><br></div><div>အဲဒီ ကြယ်လေးကို နှိပ်ပြီးရင် <b>ကျွနု်ပ် မှတ်ထားမှု</b> ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။</div>
သူပြောချင်တာ vBulletin တို့ဘာတို့မှာပါသလို .. <br><br>ဒီလိုလေးကိုပြောတာလား ..<br><br><img src="http://i53.tinypic.com/jtxxk3.jpg"><br>;
အင်း ဟုတ်မယ်။ page ကိုသွားချင်ရင်တော့ p2,p3 ဆိုပြီး address အနောက်မှာ ပြင်ပြီး ထည့်ထားသွားလို့ရတယ်။ ဥပမာ<br><div><br></div><div>http://www.mysteryzillion.org/discussion/10098/now-we-are-using-unicode/p2</div><div><br></div><div>ဆိုရင် page2ပေါ့။ အဲဒီ feature ကလည်း လူသုံးနည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြေထားတာတွေကို vote အလိုက် သို့မဟုတ် date အလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။</div>